I-Mutihara-i-Brand eNtsha eFanelwe ngokuPheleleyo kunye nezinto eziluncedo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFerdy
Imihombiso kwindawo yam ubukhulu becala iphefumlelwe kukubona indalo, yiyo loo nto umbala oluhlaza ubalasele apha. Kum, olu hlobo lomxholo, luyathuthuzela, luzolile kwaye kwangaxeshanye luyaphumla, ngakumbi emva kokubuya emsebenzini. Lonke uxinezeleko olufumana ngaphandle luye lwehla xa sele uhleli esofeni, lukhatshwa yiti obuyivubele kwangethuba. Ndingathanda iindwendwe zam zibe nezo mvakalelo.
Eli fulethi lilungele izibini ezisanda kutshata kunye neengcali eziselula. Kananjalo awudingi ukukhathazeka kunye noloyiko kuba iMutihara ibonelela ngenkqubo yokhuseleko yeeyure ezingama-24.
Le ndlu ikufutshane neendawo ezininzi zoluntu ezifana neSibhedlele seNkulumbuso iJatinegara, isibhedlele saseTebet, isibhedlele saseBudi Asih, isikhululo sikaloliwe saseCawang, kunye nesikhululo sebhasi saseKampung Melayu.
Umbuki zindwendwe ngu- Ferdy
Ndonwabile kakhulu ukubonisa iindwendwe iindawo endizithandayo ezifihliweyo zaseJakarta, nangona ubukhulu becala buqhelekile e-Indonesia, nokuba yindawo yokundwendwela, ukutya, ukusela okanye ukuthengela abo ubathandayo izikhumbuzo. Ndikwenza oku ngokwesicelo. Enyanisweni, ndizenzele incwadi yeendwendwe, ezifuna indawo, yokuyiprinta okanye ukuyijonga nje nge-app ka-Airbnb.
Ndonwabile kakhulu ukubonisa iindwendwe iindawo endizithandayo ezifihliweyo zaseJakarta, nangona ubukhulu becala buqhelekile e-Indonesia, nokuba yindawo yokundwendwela, ukutya, uku…
Iilwimi: English, Bahasa Indonesia, Español
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jatinegara